thet naing's Apps
thet naing's Likes
Thet naing's ၏မိတ်ဆွေများ
thet naing's Groups
Started this discussion. Last reply by thet naing Dec 3, 2012.5Replies0Likes
သမထနှင့်ဝိပဿနာ သမထတရား သမာဓိကျင့်စဉ်ဆိုတာ သာသနာပမှာလည်းရှိတယ်၊မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းက မြေလျှိုးမိုးပျံနိုင်တဲ့ ဈာန် အဘိညာဉ်ရတဲ့ရသေ့တွေရှိခဲ့ဘူးတယ်၊သမထဆိုတာ သာသနာပြင်ပမှာလည်းတွေ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by thet naing Jul 24, 2012.9Replies 1 Like
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်thet naing's ၏ 'ကိုးကွယ်အားထားရာ ရတနာသုံးပါး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်thet naing's ၏ 'စင်ကြယ်သော အလှူဒါနဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်thet naing's ၏ 'မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်thet naing's ၏ 'လပေါ်ကို လူသားတွေ ရောက်နိုင်ပါသလား?' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်thet naing's ၏ 'အနတ္တတရားဆိုတာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မေ 29, 2015
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်thet naing's ၏ 'မြင့်မိုရ်တောင် ဘယ်မှာ ရှိပါသလဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်thet naing's ၏ 'သီလမမြဲလျှင်ငရဲသို့ကျိန်းသေ ရောက်ရမည်ဆိုတာ မှန်ပါသလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မောင်မောင်မြတ်သူ သည်thet naing's ၏ 'ရဟန်းတော်များ ဘာကြောင့် ခေါင်းရိတ်ကြရတာလဲ?' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thwe zin သည် thet naing's၏ 'ရဟန်းတော်များ ဘာကြောင့် ခေါင်းရိတ်ကြရတာလဲ?'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
KYAW LYNN NAING သည် thet naing's၏ 'နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာ အပိုင်း (၂)'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဆရာကြီး ဦးကြည် ရဲ့ စာအုပ်တွေ ဘယ်မှာ ရှာဖတ်ရမလဲခင်ဗျ ကျေးဇူးပါ"
thet naing သည် မူကြိုဆရာ's၏ '“ပြုပြီးသော အကုသိုလ်များကို ပယ်ဖျက်လို့ ရနိုင်ပါသလား”'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဖတ်ရှု့ မှတ်သားသွားပါတယ်၊ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ။"
thet naing သည် ဉာဏ်လင်းမြို့'s၏ '★ ရဟန္တာ မှန်းသိနိုင်သလား? ★'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဖတ်ရှု့ မှတ်သားသွားပါတယ်၊ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝနိုင်ပါစေ...။"
၄၄၂ ဇော်ဇော်နိုင် သည် thet naing's၏ 'သူတော်ကောင်း တရား (၇) ပါး ဆိုတာ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
သင်းသင်းအောင် သည် thet naing's၏ 'ကိုယ့်စိတ်ကြည်လင်မှု မပျက်စီးစေချင်ရင်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
soe wunna hein သည်thet naing's ၏ 'ကထိန်သင်္ကန်း သမိုင်းကြောင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
KO KO သည် thet naing's၏ 'ပြဿနာဆိုတာ ဘာလဲ?'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
KO KO သည်thet naing's ၏ 'ပြဿနာဆိုတာ ဘာလဲ?' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
KO KO သည်thet naing's ၏ 'ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
nyansoe သည်thet naing's ၏ 'သီလမမြဲလျှင်ငရဲသို့ကျိန်းသေ ရောက်ရမည်ဆိုတာ မှန်ပါသလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
5:16am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 28, 2013, တွင် Aye Aye Cho မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မောင်လေးရေ အလည်လာခဲ့ပါတယ် စာတွေလည်းအများကြီးဖတ်သွားတယ်နော် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ..။
4:59pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 25, 2012, တွင် + မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:39pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 25, 2012, တွင် + မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:34am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 25, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:58am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 25, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:57am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 25, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ..လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ပါစေ....ခရစ်ယန်ဘာသာ ဝင်သာဆိုရင်
သူတို့ တွေအတွက်အတော်ထူးဆန်းမှာ...အကိုလဲးဘဲး ဒီဆိုဒ်မန်ဘာ ဝင်ရဲ့နံပါတ်က ၇၈၆ တဲ့
1:47am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 25, 2012, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမူ (၅) ရပ်
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 30, 2013 တွင်10:45pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments3Likes
(၂) စောင့်ထိန်းမှု သီလရှိရမည်။
(၅) သာသနာတော်ပြင်ပ၌ ကိုးကွယ်မှုကို မရှာမှီးရ -
ဆိုသော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် မူကြီး (၅)ရပ်ကို အဂ္ဂုင်္တ္တရနိကာယ် မှာ ချပြတော်မူခဲ့ပါသည်။…
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 23, 2013 တွင်2:23am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments3Likes
အမေး *** မောင်သူရ (thura.civil8@gmail.com)
များသောအားဖြင့်တပည့်တော်တို့ သိမှတ်ရသည်မှာ နောက်နောက် ဘဝများမှသာလျှင် ခံစားရသည်
ဟုသာ ကြားနာမိပါသည်။အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြသော ဥပါသကာတို့တွင် ပို၍ပင်…
သီလမမြဲလျှင်ငရဲသို့ကျိန်းသေ ရောက်ရမည်ဆိုတာ မှန်ပါသလား
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 21, 2013 တွင်12:56am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment6Likes
အမေး *** မနန်းကြူကြူလွင် (virtueloyalty@gmail.com)
အရှင်ဘုရား ရိုသေလေးမြတ်စွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား။ တပည့်တော်သည်နိုင်ငံခြားသားခရစ်ယာန်တစ်ယောက်နှင့်ဘာသာရေးအကြောင်း ပြောဖူးပါသည်။ ထိုသူကငါးပါးသီလမမြဲလျှင်ငရဲသို့ကျိန်းသေ ရောက်ရမည်ဟု မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားသည်ကို ကြားဖူးကြောင်းပြောပါသည်။ ဟုတ်ပါသလားဘုရား...။
မြင့်မိုရ်တောင် ဘယ်မှာ ရှိပါသလဲ
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 21, 2013 တွင်12:46am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
အမေး *** တပည့်တော်စိုးမင်းနိုင် (soeminnaing@gmail.com)
မြင့်မိုရ်တောင် ဘယ်မှာ ရှိလဲ ဘုရား..တစ်ယူဇနာက ဘယ်လောက် ရှိလဲ၊ကမ္ဘာကနေ နေဆီအကွာအဝေး လဆီအကွာအဝေး က တစ်ခါက တပည့်တော်တွက်ကြည့်တာမကိုက်ဘူး ဘုရား! ဘုရားကိုတော့ ယုံတယ် ဘုရား မှတ်တမ်းတွေကများ လွဲလို့လား ဘုရား. Mm နှင့် mm လို ဘုရား...…